Hoyga > Wararka > Wararka warshadaha > Hordhaca alaabada PC-ga ee balaastigga ah
Badanaa waxaa loo isticmaalaa warshadaha shirarka muraayadaha, warshadaha gawaarida iyo elektarooniga, warshadaha korantada, oo ay ku xigto qaybaha mashiinada warshadaha, CD, baakadaha, kombiyuutarka iyo qalabka kale ee xafiiska, daryeelka caafimaadka iyo caafimaadka, filimka, waqtiga firaaqada iyo qalabka ilaalinta.
Polycarbonate PC waa polyester kaarboon kaarboon toosan ah kaas oo kooxaha kaarboonoolaha ay si isdaba joog ah ugu diyaarin karaan kooxo kale oo udugga, aliphatic, ama labadaba noqon kara.
Wax soo saarka caaryada PC-ga waxay leeyihiin iska caabin kuleyl wanaagsan, heerkulka isticmaalka muddada-dheer wuxuu gaari karaa 130â ƒ, wuxuuna leeyahay iska caabin wanaagsan oo qabow, heerkulka wax soosaarka ee -100â „ƒ. PC ma laha meel dhalaalaya oo muuqata, in 220-230â ƒ ƒ uu ahaa gobolka la dubay, sababtoo ah qallafsanaanta silsiladda molikalikada ee weyn, iskudhafka dhalaalku wuxuu ka sarreeyaa kuwa kale ee thermoplastics-ka.
Guryaha Farsamada ee
Wax soo saarka caaryada PC-ga waxay leeyihiin sifooyin jireed iyo farsamo oo aad u fiican, gaar ahaan xoog saameyn xoog leh, xasilooni wanaagsan oo cabbir leh, wali waxay ilaalin kartaa awood farsamo sare heerkulka hoose; Si kastaba ha noqotee, awoodda iska caabbinta daalku wuu hooseeyaa, walwalka dildilaaca waa sahlan tahay inuu dhaco, iyo xirashada PC-ga aan la bedelin waa midab la'aan iyo hufnaan, wuxuuna leeyahay gudbinta iftiin wanaagsan oo muuqda.
Waxyaabaha caaryada PC-ga waa kuwo xasilloon oo ay ku jiraan warbaahinta aashitada iyo saliidda, laakiin ma aha kuwo alkali u adkaysta, oo lagu milmi karo jiilka chlorine. Waxyaalaha uumiga-cadaadiska.
Ogeysiisyada loo isticmaalo:
Way fududahay in la sii daayo walaxda sunta ah ee loo yaqaan 'bisphenol A', oo waxyeello u leh jirka bini'aadamka. Ha u isticmaalin kuleylka ama qorraxda tooska ah.
Hore:Hordhaca alaabada caagga ka sameysan
Xiga:Qalabka loo baahan yahay soo saarista wasakhda caaga ah ee loogu talagalay isticmaalka reerka